❤ Ama-Casa Boodes, Indawo Yokupaka ‧ Indawo Yokubhukuda ‧ Ingadi ❤ - I-Airbnb
❤ Ama-Casa Boodes, Indawo Yokupaka ‧ Indawo Yokubhukuda ‧ Ingadi ❤
Lagos, Faro, i-Portugal
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Cristina
Le penthouse ekhethekile iyisitofu senhliziyo, enesikhundla esihle enkabeni yesikhungo somlando, esibekwe endaweni enengadi enhle yangasese, indawo yokubhukuda yomphakathi futhi itholakala emgwaqweni omncane kuyilapho uqhele ngegxathu elilodwa kuzo zonke izitolo, amathilomu nezindawo zokudlela.
Lona futhi ungomunye wamafulethi ambalwa enkabeni enendawo yokupaka yangasese!
Kulabo abathanda ikhwalithi nesitayela, ngokubukwa okuhle endaweni emaphakathi enhle, ukubhukha kubalulekile :)
- Isakhiwo savuselelwa ngokugcwele eminyakeni embalwa edlule. Izindawo zomphakathi zakudala kakhulu ezinezitebhisi ze-okhi, amasilingi aphakeme nesici sokusayina ama-chandeliers. Izindawo zomphakathi zihlanganisa ingadi enhle enohlonze kanye nokubhukuda okuthandekayo nokubukwa kwedolobha.
- Ifulethi lisanda kulungiswa, linakisiswe ngokukhethekile imininingwane emincane kakhulu futhi ligcina umphefumulo ongokomlando. Indawo yokungena iholela endaweni yokudlela/yokuhlala enamafasitela amakhulu anikeza ukubukeka okuhlaba umxhwele ebhishi lase-Meia Praia nedolobha. Kukhona indawo yomlilo yakudala, isitezi sase-Santa Catarina, uphahla lokhuni kanye nophahla lwengilazi i-pergola. Leli kamelo lingena ngokuphelele ku-patio enomusa netafula lokudlela kanye ne-patio encane ehlukile enomuzwa wokunethezeka othandekayo.
Ifulethi linamakamelo okulala amabili e-En-suite, ngalinye lisayizi omuhle, linamawodilobhu kanye ne-balcony encane enikeza ukubukwa kwedolobha elinomlando. Ikamelo elilodwa lineshawa engena endlini kanti elinye linegumbi lokugezela elinefasitela elisophahleni elinikeza ukukhanya okukhulu. Ikhishi nalo lalilungiswe ngokuphelele futhi linemishini emisha kanye ne-cooler yewayini!
Inombolo yepholisi: 38998/AL
Izilimi: English, Deutsch, Português, Русский